Puntland oo sheegtay inay bur-buriyeen fariisinkii Al-shabaab ee buuraha Galgala – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Puntland oo sheegtay inay bur-buriyeen fariisinkii Al-shabaab ee buuraha Galgala
Wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan buuraha Galgala ee gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Puntland ay weerar ku qaadeen fariisimo ay halkaasi ku lahaayeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab.
Ciidamada Puntland ayaa howlgalo ay ka sameeyeen deegaanada Madarshoon iyo Diindigle oo ka tirsan buuraleyda Galgala ee gobolka Bari, waxay ku dileen illaa 12 dagaalyahano oo ka tirsan Al-shabaab.
Saraakiil ka tirsan maamulka Puntland ayaa sheegay inay howlgalkaasi ay ku bur-buriyeen fariisimaha Al-shabaab ee deegaanada ku yaalla buuraha Galgala, iyagoona sidoo kale tilmaamay inay la wareegeen dhowr boqol oo ah noocyada kala duwan ee raashinka iyo agabyo kale.
Dhinaca kale, ma jiro wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha Al-shabaab, kaas oo kaga hadlayaan sheegashada saraakiisha Puntland oo ah inay bur buriyeen fariismihii ay buuraha Galgala kaga sugnaayeen dagaalyahanada Al-shabaab.
Inta badan ciidamada Puntland ayaa weeraro ku qaado fariisimaha ay ku sugan yihiin buuraha Galgala, waxaana markii ay weeraradaasi dhacaan ka dhasha qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, soo kala gaara labada dhinac ee halkaasi ku dagaalama.